Nagu saabsan - Hangzhou Sax Makiinado Co., Ltd.
Nidaamka daaweynta dareeraha cusub --- habka dareeraha Ultrasonic
--- Horumar tayo leh
Hangzhou Sax Makiinado Co., Ltd. wuxuu ka yimid aqoon isweydaarsi qoys oo yar ilaa 1995. Si loo xaliyo baahida suuqa ee qaybaha asaasiga ah ee ultrasonic: transducers.Hangzhou Sax noqo shirkaddii ugu horreysay ee warshadeed ee wax-soo-saarka alxanka ultrasonic ee Shiinaha. In ka badan 20 sano oo shaqo adag ah, hadda Hangzhou Sax Makiinado Co., Ltd. waa shirkad wax soo saar farsamo oo isku dhafan cilmi baarista iyo horumarinta, soo saarista, iibinta iyo adeega qalabka ultrasonic, taangiyada habsami u socodka iyo qalab dhameystiran. Waxaan haynaa shaqaale, R & Ds, iibin iyo kooxaha iibka kadib in kabadan 100 shaqaale. Gaar ahaan, kooxdayada R & D ee farsamada ayaa wada shaqeyn adag la gaadhay kulleejooyinka gudaha iyo jaamacadaha iyo machadyada cilmi-baarista xirfadeed.
Muddo dheer kadib sahaminta suuqa iyo is-hagaajinta kadib, hadda waxaan helnaa natiijooyin aad ufiican oo aan ku kala firdhino aaladaha tamarta cusub, diyaarinta graphene, kala firdhinta alumina, kala firdhinta, soosaarida biodiesel, kala firdhinta silica, soo saarista daawada Shiinaha, nadiifinta warshadaha cuntada iyo emulsification, isku darka kiimikada iyo isku-dhafka, daaweynta bullaacadaha COD, nadiifinta warshadaha dawooyinka, burburin iyo nadiifin.
Hangzhou Sax Makiinado Co., Ltd. Ku adkeyso ku guuleysiga suuqa tayo leh, ku guuleysiga macaamiisha adeegga, iyo had iyo jeer diiradda saar danaha macaamiisha.
Waxaan khubaro ku nahay dalabka warshadaha ultrasonic. Waxaan leenahay waayo-aragnimo hodan ah oo ku saabsan codsiga ultrasonic waxaanan leenahay faham gaar ah dhaqanka waddan kasta. Sidaa darteed, waan fahmi karnaa soona jeedin karnaa xalal hal abuur leh iyadoo loo eegayo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha, waxaanan heli karnaa habka ugu haboon ee qaabeynta iyo soosaarka.